China KN95 မျက်နှာဖုံးလုပ်စက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Gongming Automation Technology Co. , LTD
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > KN95 မျက်နှာဖုံး > KN95 မျက်နှာဖုံးလုပ်စက်
This kn95 mask machine is composed of 1 KN95 မျက်နှာဖုံးလုပ်စက်,2or3ear loop welding machines and2or3edge sealing machines, to realize semi-automatic production. For the high machine stability,the production efficiency is better than automatic production line.
KN95 မျက်နှာဖုံးလုပ်စက် mainly includes automatic feeding mechanism, folding forming mechanism, knurling and edge pressing mechanism and cutting mechanism to realize automatic feeding of cloth, integration of multi-layer cloth, placement of nose beam strip, knurling and edge pressing, cutting and forming, and material pulling and slicing.
ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောအထည်လိပ်တစ်ခုလုံးကို bracket တွင်နေရာချပြီး၊ motor-roller မှတစ်ဆင့်ကျွေးသည်။ ၎င်းကိုပါဝင်သည့်နှာခေါင်းရောင်ခြည်ချွတ်ထားသည့်နေရာသို့၎င်းနောက် ultrasonic knurling, ဖြတ်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းသည့်နေရာသို့ပို့သည်။ နှင့် kn95 မျက်နှာဖုံးခန္ဓာကိုယ်ထွက်ဖြစ်၏
နားခါးပတ်ဂဟေဆော်စက်တွင်နားခါးပတ်အလိုအလျောက်အစာကျွေးသောကိရိယာ၊ နားခါးပတ်ဖြတ်စက်၊ အလိုအလျောက်နေရာချထားသတ်မှတ်ထားသောဂဟေဆော်စက်နှင့်ပစ္စည်းထုတ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသောအရှည်နှင့်နားပတ် ၀ န်းကျင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးသတ်မှတ်ထားသောမျက်နှာဖုံးအနေအထားတွင်ဖြတ်ထားသောခါးပတ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးကိရိယာသည်နားကွင်းဆက်ကို ultrasonic မှဂဟေဆော်ခြင်းပြီးဆုံးသည်။
မျက်နှာဖုံးကို load အနေအထားသို့လက်ဖြင့်ထည့်ပါ။ "start" သို့မဟုတ် foot switch ကိုနှိပ်ပါ။ စက်သည်နားနှစ်ကွင်း၏ဂဟေဆော်မှုကိုအလိုလျောက်ပြီးအောင်လုပ်ပြီး၊ start အနေအထားသို့ပြန်သွားပြီးနားကွင်းကွင်း၏ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ပါ။
နားကွင်းဆက်ကိုဂဟေမှိုပြီးသောမျက်နှာဖုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုခေါက်ပါ။ ၊ ပေါင်းစုံပါသည့် rotary စားပွဲသည်အစွန်းတံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက်ဂဟေဆော်သည့် pasition သို့လှည့်ပါ၊ ထို့နောက်စုဆောင်းရန်အတွက် lay-off အနေအထားသို့လှည့်ပါ၊ ညှပ်, ထို့နောက်ချောထုတ်ကုန်ထွက်လာ;
Hot Tags: ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏ၊ အခမဲ့နမူနာ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ CE၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းနိုင်၊ နောက်ဆုံးရောင်း၊ တစ်နှစ်အာမခံ